Faah faahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal culusoo fiidnimadii xalay ku dhaxmaray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Al-shabaab degmada Buurdhuubo ee gobolka. Dagaalkan ayaa ka dambeeyay kaddib markii xoogaga ururka Al-shabaab ay weerar ku qaadeen mid ka mid ah fariisimaha ciidamada dowladda ay ku leeyihiin degmadaasi. Xassan Maxamed Cali guddoomiyaha degmada Buurdhuubo oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in weerarka in uusan aheyn mid culus, aysana jirin khasaare ka dhashay oo dhankooda ah. “Maqribnimadii xalay waxaa ay rasaas ku soo rideen mid ka mid ah Saldhigyada ciidan ee ku yaalla banaanka Magaalada, kaddib ciidamada ayaa u jawaabay oo iska difaacay, anaga dhankeena wax khasaare nama soo gaarin” ayuu yiri Guddoomiyaha. Al-shabaab oo dhincooda ka hadlay weerarka waxaa ay sheegeen in dagaal xoogan ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiya ay ku lahaayeen degmada Buurdhuubo ee gobolka Gedo, islamarkaana khasaare kala duwan gaarsiiyeen ciidamadii halkaa ku sugnaa. Waxaa saakay xaalad deganaansho ah laga dareemayaa goobihii uu dagaalka ka dhacay, iidamada dowladda ayaa baaritaano ka wada guud ahaan gobolka Gedo gaar ahaan degmada Buurdhuubo. Gobolka Gedo ayaa ka mid ah deegaannada ay ku xooggan yihiin Al-shabaab, waxaana inta badan ka dhaca weeraro lagu beegsado saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM. |
Faah faahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal culusoo fiidnimadii xalay ku dhaxmaray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Al-shabaab degmada Buurdhuubo ee gobolka. Dagaalkan ayaa ka dambeeyay kaddib markii xoogaga ururka Al-shabaab ay weerar ku qaadeen mid ka mid ah fariisimaha ciidamada dowladda ay ku leeyihiin degmadaasi. Xassan Maxamed Cali guddoomiyaha degmada Buurdhuubo oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in weerarka in uusan aheyn mid culus, aysana jirin khasaare ka dhashay oo dhankooda ah. “Maqribnimadii xalay waxaa ay rasaas ku soo rideen mid ka mid ah Saldhigyada ciidan ee ku yaalla banaanka Magaalada, kaddib ciidamada ayaa u jawaabay oo iska difaacay, anaga dhankeena wax khasaare nama soo gaarin” ayuu yiri Guddoomiyaha. Al-shabaab oo dhincooda ka hadlay weerarka waxaa ay sheegeen in dagaal xoogan ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiya ay ku lahaayeen degmada Buurdhuubo ee gobolka Gedo, islamarkaana khasaare kala duwan gaarsiiyeen ciidamadii halkaa ku sugnaa. Waxaa saakay xaalad deganaansho ah laga dareemayaa goobihii uu dagaalka ka dhacay, iidamada dowladda ayaa baaritaano ka wada guud ahaan gobolka Gedo gaar ahaan degmada Buurdhuubo. Gobolka Gedo ayaa ka mid ah deegaannada ay ku xooggan yihiin Al-shabaab, waxaana inta badan ka dhaca weeraro lagu beegsado saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM.
Mareykanka (estvlive) 20/03/2018
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku baaqay in dil lagu xukumo dadka daroogada ka ganacsada, arrintaas oo qayb ka ah qorshaha uu wax ooga qabanayo laqabatinka baaxadda leh ee dadka maraykanku ay ku adeegsadaan xannuun baabi’iyaha.
Qorshahan ayuu hoosta ka xariiqay mar uu khudbad ka jeedinayay New Hampshire, gobolkaas oo ah mid ay aad u saamaysay arrintaas.
Trump ayaa sheegay in maamulkiisu uu rabo in sharciga la badalo si dil loogu xukumo dadka daroogada ka ganacsada, laakiin arrintaas wuxuu kala kulmi doonaa culays dhanka siyaasadda ah iyo mid dhanka sharciyadda ah.
Daroogadan waxaa ka mid ah nooc xannuun baabi’iye loo adeegsado oo dhakhaatiirtu ay bukaanka u qoraan.
2.4 oo ruux oo Maraykan ah ayaa la rumaysan yahay in ay la qabatimeen daroogo, mashaakilkaas ayaana sababay in ay u dhintaan 63,600 oo Maraykanka oo dhan ku kala noolaa sannadkii 2016, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka.
Trump ayaa loo sacabotumay Isniintii markii uu deegaanka Manchester ee New Hampshire ka yiri “haddii aynaan gacan bir ah ku qabanin dadka daroogada ka ganacsada wakhtiga unbaan iska luminaynaa, gacantaas birta ahna waxaa ka mid ah in dil toogasho ah lagu xukumo.
Trump ayaa horray u tilmaamay in dadka daroogada ka ganacsada loo adeegsado ciqaabta “ugu adag” wuxuuna hadalkaas ka jeediyay isu soo bax ka dhacay Pennsylvania isla bishan.